အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ရင်း လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ သင်တန်းတက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဟိန်းထက်…. – Cele Oscar
အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ရင်း လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ သင်တန်းတက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဟိန်းထက်….
August 12, 2021 By L YC Knowledge
သရုပျဆောငျ ဟိနျးထကျ ကို တော့ ခဈြပရိသတျကွီး ခဈြမှာပါ။အောငျမွငျနတေဲ့ တတျသဈစ သရုပျဆောငျ တဈယောကျ ဖွဈသလို ခဈြပရိသတျတှေ ရဲ့ အခဈြပေါငျးမြားစှာကို လညျး ရယူပိုငျဆိုငျထားသူလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။ဇာတျလမျးတှဲ တှမှော ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျ တကျတဲ့ ဟိနျးထကျက ပရိတျသတျတှရေဲ့အခဈြကို ရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျကောငျး တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
သရုပျဆောငျဟိနျးထကျ က နှဦေးတျောလှနျရေး မှာလညျး ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူအမှနျတရားအတှကျ ရဲရငျ့စှာ တိုကျပှဲဝငျနခေဲ့ တာလညျးဖွဈပါတယျ။ယခုမှာဆိုရငျတော့ဖွငျ့ သရုပျဆောငျဟိနျးထကျ ဟာ လှတျမွောကျနယျမွမှော လကျနကျ ကိုငျပွီး အာဏာရှငျကို တျောလှနျဖို့အတှကျ တောထဲကို ရောကျ ရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။
လှတျမွောကျနယျမွမှော လကျနကျကိုငျပွီး ရိုကျထားတဲ့ ဓါတျပုံကို သူရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ မြှဝထေားပွီး သူ့ရဲ့ပွတျသားတဲ့ စိတျဓါတျကို ပွညျသူတှကေလညျး လေးစားနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။အောငျမွငျနတေဲ့ ပြိုတိုငျးခဈြတဲ့ မငျးသားဘဝကို စှနျ့လှတျကာ ပွညျသူတှအေတှကျ မားမား မတျမတျ ရပျတညျပေးတဲ့ သရုပျဆောငျဟိနျးထကျရဲ့ စိတျဓါတျကို လေးစား ဂုဏျပွုပါတယျ။ယခုထပျပိုပွီးလညျး အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Credit….khit yoe yar
သရုပ်ဆောင် ဟိန်းထက် ကို တော့ ချစ်ပရိသတ်ကြီး ချစ်မှာပါ။အောင်မြင်နေတဲ့ တတ်သစ်စ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်သလို ချစ်ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်ပေါင်းများစွာကို လည်း ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင် တက်တဲ့ ဟိန်းထက်က ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်ကို ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ဟိန်းထက် က နွေဦးတော်လှန်ရေး မှာလည်း ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူအမှန်တရားအတွက် ရဲရင့်စွာ တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် သရုပ်ဆောင်ဟိန်းထက် ဟာ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ လက်နက် ကိုင်ပြီး အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ဖို့အတွက် တောထဲကို ရောက် ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ လက်နက်ကိုင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို သူရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ မျှဝေထားပြီး သူ့ရဲ့ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပြည်သူတွေကလည်း လေးစားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့ ပျိုတိုင်းချစ်တဲ့ မင်းသားဘဝကို စွန့်လွတ်ကာ ပြည်သူတွေအတွက် မားမား မတ်မတ် ရပ်တည်ပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟိန်းထက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစား ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ယခုထပ်ပိုပြီးလည်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် သူမရဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာတွေကို ဘယ်လိုကုစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူချပြလာတဲ့ မေတိုးခိုင်…
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ဘဝမှာ သူမဘယ်လိုနေထိုင်နေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်း……